Dowlada iminka jirta ma Ma dowlad Soomaaliyeed baa misa Dowlad Hiraab, Mariixaan iyo Majeerteen ? | warsugansomaliya.wordpress.com
Dowlada iminka jirta ma Ma dowlad Soomaaliyeed baa misa Dowlad Hiraab, Mariixaan iyo Majeerteen ?
Iyada oo aduunyada oo dhan ay ka jiraan dowlada u shaqeeya danaha qarankooda si loo gaaro hadaf guud oo lawada Hiigsanayo ayaa dowlada Soomaaliya waxa ay lasoo baxday barnaamij kaa ka duwan oo ah in loo shaqeeyo qabiilla gaar ah halka qaar kale loola dhaqmayo sida iyaga oo dalka oo dhan aan wax ku laheyn.
Dowlada Soomaaliya waxa ay muhiimad gaar ah siisaa deegaanada ay uga noolyihiin dalka qabiila gaar ah halka qabiilla kalana aan warkooda cidi gelin oo aan lakala jecleyn horumarkooda iyo dib u dhacooda sida ay qabaan dad badan oo indheer garad ah.
Waxaa dowlada Soomaaliya ay qarash badan ku bixisaa magaalada Kismaayo iyo sida arinteeda ay dhinac ugu dhici laheyd iyada oo qeyba badan oo dalka kamid ah oo xaq u leh in Cadawga laga dul-qaado ay dhibaata ku hayaan dagaalamayaal Shabaab ah.
Quburo dhaqaalaha ku taqasusay arintana sheeda kala socday ayaa waxa ay sheegeen in lacagaha tirada badan ee lagu bixinayo gudiyada Kismaayo loo saaraayo iyo wafdiyada is-daba joogga ah ee loo diraayo ay muujinayaan in dana gaar ah ay jiraan qarashka aadka u badan ee ku baxayaan hadii wax looga qaban lahaa deeegaanada Shabaabku ku badanyihiin ee qabiilada aan danta laga laheyn ay ku noolyihiin mar hore Shabaab dalka laga xureyn lahaa.
Marka aan arinta gudaha u galno, majiro deegaan ay ku noolyihiin Hiraab, Mariixaan iyo Majeerteen oo Shabaab si buuxda awood uu ugu leeyahay marka laga reebo deegaanno fara ku tiris ah oo kaabiga ku haya deegaanno la doonayo in cadawgu ku sii noolaado dadkooduna aysan waligood dhibaatada ka bixin.
Qeyba Badan oo kamid ah gobalada Gal-guduud iyo Hiiraan ayaa waxaa xoog ku leh kooxda Shabaab arintaas oo loo aaneynayo in aysan badankood deegaandaasi aysan ku nooleyn Hiraab, Mariixaan iyo Majeerteen oo iyagu majaraha u haya dowlada Soomaaliya doonayana in ay qabiiladooda ugu shaqeeyaan oo kali ah.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo R/wasaaruhuba waxa ay socdaallo ku tageen deegaanno ay ku noolyihiin oo kali ah qabiilada aan kor kusoo xusnay marka laga reebo laba safar oo R/wasaare Saacid uu ku tegay magaalooyinka Baydhabo iyo B/weyne, waxaana dhamaan socdaaladaasi ay muujinayeen in ay jiraan qabiilo gaar ah oo muhiimad lasiinayo halka Soomaali Weyn leeska indha tiraayo.
Odayaal kasoo jeeda gobalka Hiiraan oo afka furtay ayaa waxa ay sheegeen in hadii dowlada Soomaaliya ay ka joojin weyso ka xaglinta iyo hagar daamada ay suura gal tahay in ay ku dhawaaqaan in ay noqonayaan kelinka Lixaad ee dalka Ethiopia ilaa laga helaayo xal umada Soomaaliyeed oo dhan wax u tara.
Dad badan oo ku nool deegaanada aan ku jirin gacanta dowlada Soomaaliya lana yaaban qarashaadka lagu bixinayo deegaanno mar hore Shabaab laga xureeyay ayaa is-weydiinaya in dowladu tahay dowlad Hiraab, Mariixaan iyo Majeerteen iyo in ay tahay dowlad Soomaaliyeed, waxanaa jawaabta Su’aashaasi ay tahay mid looga fadhiyo dowlada Soomaaliya
← Daawo Sawirada Qarax Xoogan oo maanta Magaalada Kismaayo lagula eegtay Ciidamo katirsan AMISOM.
War Deg Deg ah kooxo hubeysan oo caawo Degmada B/weyn ku toogtay madaxii gasoorka degmadaasi →